Puntland Voice – Page 1043 – Codka Dalka iyo Dadka
Ceel-Barde (AB):-Wararka ka imaanaya Magaalada Ceel-Barde ee Gobolka Bay ayaa sheegaya in isgaarsiintii degmadaasi ay dib hawada ugu soo laabatay kadib markii ay dhawaan jareen Ciidamo Itoobiyaan ah oo halkaasi gaaray. Gudoomiyaha Degamada Ceelbarde ee Dowlada KMG Soomaaliya Ibraahim Cumar […]
shariifka oo dawladii kaldirey iyo kursi buuxshe sharciga magan galey
sheekh adaan madoobe oo aan saaka libdhadu usoo bixin
kulan deg dega oo ay isugi yimaaden in kabadan 400 oo xil dhibaadan ayaa shalay galab xilkii ka xayuubiyey gudoomiyhii golaha baarlamaamnka kasoo iminka kusan xarunta madax tooyada soomaaliya si kastaba ha ahaatee wxaan diyaarinayaaa
wadahalo bu burey
waxaa soo shaac baxaya warar sheegaya in dhamaan wada hadaladii usocdey ururka xisbul islaam iyo dawalada sheekh shariif u hakad galay taasoo keentay in dagaaaladii uru diimeedka ehelu suna aya kabaxeen kuwaasoo dawlada ay iminka ku dhawdahaY BUR BUR BALAARAN […]
aayaa loxisbigii talda hayey ee dalkaan brian o sheegayaa in dalaka alaga majaxaabiyeyey sidaa daraadeed ayaa
aayaa loxisbigii talda hayey ee dalkaan brian o sheegayaa in dalaka alaga majaxaabiyeyey sidaa daraadeed ayaa lasheegat=ayaa in aan siwada jira looga qabto sidaa daraadeed waxaan loo sheegayaa inaan loosheegayowaxaaan kaloo sheegayaa waxaa loo sheegayaaa aayaa loxisbigii talda hayey ee […]
Dagaalada faraha looga gubyey ayaa galabta ka dhacay gudaha magaalaqda hargeysa kusoo u dhexeeya
sirdoonka dalka ethoopia iyo magaalada horgaysa waxaa kaloo jira wax yaabo badan oo isa soo taraya oosheegDagaalada faraha looga gubyey ayaa galabta ka dhacay gudaha magaalaqda hargeysa kusoo u dhexeeya atya sidaa daraadeed waxaa dhacaya
Muqdisho (AB):-Waxaa Maanta Magaalada Muqdisho kulankii caadiga ahaa ku yeeshay Gudiyada Baarlamaanka Soomaaliya kuwaasoo isla soo qaaday sidii dib loogu furi lahaa Kalfadhiyadii Baarlamaanka oo mudo xaniban. Gudoomiyaha Xilkiisa lagu muransan yahay ee baarlamaanka Soomaaliyeed Sh.Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo […]
uruka xaragada alashabaab iyo ahlu sunah oo guula kala sheegtey
Ururka Xarakatu Shabaabul Mujaahidiin iyo Ahlu suna Guulo ka kala sheegtay Dagaalo culus oo ilaa xalay ku dhexmarayay Degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag. Muqdisho (AB):-Saraakiil u kala hadashay Xarakatu Shabaabul Mujaahidiin iyo Ahlu suna ayaa guulo ka kala sheegtay dagaaladii shalay […]
Af-hayeen u hadlay Dowlada KMG Soomaaliya oo Jawaab ka baxshay Awaaiirtii Ururka Xisbul Islaam uu dul dhigay Idaacadaha
Muqdisho (AB):-Sarkaal u hadlay Dowlada KMG Soomaaliya ayaa jawaab ka baxshay amar shalay galab ka soo baxay Ururka Xisbul Islaam kaasoo ahaa inaaney Idaacaduhu sii deyn karin heesi iyo muusik wixii hada ka danbeeya. Afhayeenka Wasaarada Warfaafinta Dowlada KMG Soomaaliya […]